Maitiro ekudzima zviziviso zvekudzidzisa paApple Watch | IPhone nhau
Maitiro ekudzima zviziviso zvekudzidzisa paApple Watch
Jordi Gimenez | 26/10/2021 12:00 | Apple Watch, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Uyu ndomumwe wemibvunzo iyo vamwe venyu vanotibvunza kakawanda uye ndosaka tafunga kugadzira iyi diki dzidziso. Chaizvoizvo basa iri kuti mune zvimwe zviitiko yakaitwa nokusazvidira muzvirongwa zvewachi uye zviri nyore kudzima.
Mune yangu, yakaitwa otomatiki (kana ndinogona kunge ndakaimisa ndisina kuzviziva) mune yekupedzisira yakaburitswa vhezheni yewatchOS inoshanda system. Vazhinji venyu hamuna iyo inoshanda asi zvakanakawo kuziva kuti tingadzimisa sei izvozvo "kudzidzira kumbomira" kana "mhete yekurovedza muviri yapera" yambiro, pakati pezvimwe.
Apple Watch vanokwanisa tizivise pane imwe nguva panguva yekudzidziswa uye izvi zvinogona kudzikisira. Iyo isarudzo yekuti mune yangu yakagadziriswa yega, ini handina kuigadzirisa chero nguva. Iye zvino tava kuona kuti tingaite sei kana kuimisa nematanho akareruka aya. Chiito ichi chinogona kuitwa kubva pawachi pachayo kana kubva ku iPhone, chekutanga tichaona maitiro ekudzima zviziviso kana yambiro kubva ku iPhone:
Isu tinovhura iyo Watch app pane iyo iPhone
Dzvanya paKudzidzisa sarudzo
Isu tinokwira kumusoro uye tinotsvaga yekupedzisira sarudzo: Mazwi emhinduro
Panguva ino tinoona kuti zvinonyatsoratidza izvozvo Siri anogona kutiverengera zviziviso nezve maekisesaizi. Isu tinodzima kana kumisa uye ndizvozvo. Kuita activation iyi kana kudzima zvakananga kubva kuApple Watch isu tinofanirwa kutevedzera iwo matanho asi pawachi.
Isu tinodzvanya korona yedhijitari uye tinowana iyo Settings. Kana tapinda tinongo tsvaga app yekudzidzira todzika pasi tsvaga sarudzo "Voice mhinduro" inova ndiyo sarudzo yatinofanira kumisa kana kuti kudzima. Pamwe seni wakaita sarudzo iyi usingazvizive kana kuti yakatoitwa otomatiki, chakakosha kuziva kwatinofanira kuenda kuti tiite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekudzima zviziviso zvekudzidzisa paApple Watch
Runyerekupe rutsva runonongedza kudiki shanduko mukugadziridzwazve kweiyo iPhone SE 3 (kana SE Plus)
Chii chitsva muIOS 15.1